33% amin'ireo Amerikanina tsy vita vaksiny no nilaza fa tsy hanao vaksiny mihitsy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » 33% amin'ireo Amerikanina tsy vita vaksiny no nilaza fa tsy hanao vaksiny mihitsy
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Zon'olombelona • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny olona any UK dia mety hanao vaksiny indroa toy ny olona any Etazonia.
Ny amerikana indroa mety tsy nahazo jab tokana izay mitovy aminy amin'ny UK.
39% ny Amerikanina tsy hanao vaksiny satria 'tsy matoky ny governemanta' izy ireo.
Ny governemanta amerikana dia manana dia lavitra matotra handresen-dahatra ny Amerikanina hatao vaksiny.
Navoaka androany ny angon-drakitra sy ny valin'ny fanadihadiana farany momba ny fisalasalana amin'ny vaksin any Etazonia sy United Kingdom, izay nanambara fa manana dia lavitra ny governemanta amerikana handresena lahatra ny olom-pireneny momba ny maha-zava-dehibe ny fanaovana vaksiny.
Ny fanadihadiana dia natao ny 5 aogositra 2021 ka hatramin'ny 17 aogositra 2021 ary nandatsa-bato mpandray anjara 5,000 1,000 tany Etazonia sy mpandray anjara XNUMX XNUMX tany Angletera. Nangonina ny angon-drakitra tamin'ny alàlan'ny fomba vaovao iray handoavan'ireo mpampiasa finday avo lenta ho mpiasa "gig" noho ny fandraisan'anjaran'izy ireo ary niteraka valiny marobe tamin'ireo olona an'arivony hatreto.
Ny valiny dia nanambara fanavakavahana manan-danja eo amin'ireo mponina tsy vita vaksiny any Etazonia sy UK ary mampiseho fanoherana isan-karazany amin'ny fanoherana vaksiny. Ny fanadihadiana dia manasongadina ihany koa ny fisokafan'izay azo ampiasaina mba handresena lahatra ireo tsy vita vaksiny hatao vaksiny.
Ireto misy sasany amin'ireo fikarohana hita mahaliana indrindra avy amin'ilay fanadihadiana:
Ny amerikana dia in-droa azo inoana fa tsy nahazo fatra iray tamin'ny vaksinin'ny COVID-19 (45%) noho ny mpiara-miasa aminy anglisy (23%).
33% ny amerikana tsy vita vaksiny ary 23% ny olom-pirenena anglisy tsy vita volo no nilaza fa tsy hanao vaksiny mihitsy.
Amin'ireo izay mbola tsy vita fanamarihana dia 39% ny Amerikanina ary 33% mpandray anjara UK no nilaza fa tsy hanao vaksiny satria tsy matoky ny governemanta izy ireo.
Amin'ireo izay mbola tsy nanao vaksiny, 46% amin'ireo mpandray anjara any Angletera no nilaza fa hanao vaksiny raha toa ka misy porofo marobe fa mandeha ireo vaksinina raha ampitahaina amin'ny 21% fotsiny amin'ireo Amerikanina tsy vita vaksiny.
7% monja amin'ireo mpandray anjara amerikana mbola tsy nanao vaksiny no nilaza fa tsy nanao vaksiny satria tsy nihevitra izy ireo fa tena loza ny COVID, fa 33% amin'ireo mpandray anjara UK tsy vita vaksiny no nitanisa izany ho fisainany.
Ireo valim-pikarohana ireo dia manondro fa ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka any Etazonia sy UK dia miatrika fanamby tsy manam-paharoa amin'ny fandresen-dahatra ny isam-ponina tsy voamarina mba hahazoana ny Covid-19 vaksinina. Miaraka amin'ny 69% amin'ireo mponina tsy vita vaksiny UK vonona hanao vaksiny raha vantany vao mahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny fitiliana, ny fiarovana na ny fahombiazana izy ireo (raha ampitahaina amin'ny 49% fotsiny an'ny amerikanina tsy vita vaksiny), ny lalana mandroso ho an'ireo mpanao politika UK dia toa mahitsy kokoa. Ireo mpanao politika amerikana kosa dia mila miady amin'ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka izay nanambara fa tsy hanao vaksiny mihitsy ary tsy hanao izany satria tsy matoky ny governemanta izy ireo.
Oay! Alefaso tsara ny sidinao Lufthansa avy any Eropa mankany ...